Dalka Shiinaha oo kordhinaya awooddiisa Militariga & Nuklearka – Kasmo Newspaper
Dalka Shiinaha oo kordhinaya awooddiisa Militariga & Nuklearka
Updated - November 30, 2017 5:37 pm GMT
London (Kasmo), Wargayska maalinlaha ah “People’s Daily” kuna hadla afka Xisbiga Shuuciga ayaa qoray in, laga bilaabo sannadka 2018ka, la diyaarin doono Gantaalka DF-41, oo ah nooca (ICBM) ee Qaaradaha isaga gudba, gaarina kara masaafada ugu dheer dunida oo la mid ah 12,000 oo Km.
Yang Chengjun, Xeeldheere Militari oo Shiinees ah wuxuu sheegay in tijaabadii u dambaysay ee hubkaan oo jiilkii 4aad ah, aadna istrateeji ugu ah Shiina, lagu guulaystay.
Xogta laga hayo Gantaalka DF-41, oo dhererkiisu yahay 16,5 mitir, balliciisuna yahay 2,78 mitir, isla markaana xambaari kara 10 madax, wuxuu cadow u yahyay Gantaallada jiilka 6aad ee dalalka qaarkood samaysteen, sida midka Maraykanka LGM-30 Minuteman, iyo midka Ruushka RT-2PM2.
Gantaalkan cusub ee Shiinaha wuxuu awood u leeyahay in uu duqeeyo goob kasta oo dunida ka mid ah, isaga oo ka dhigaya Shiinaha dal awood u leh in uu ka jawaabo weerar kasta oo Nuklear ah, sida uu sharraxayo Yang.
26kii Nofember 2017 Warshad Maraakiibta samaysa kuna taalla Gobolka bartamaha Shiina ee Hubei waxay caddeysay in ay bilaabayso dhismaha Saldhig badeed (Marine Platform) Nuklear ah oo loogu talagalay in uu tamar siiyo rugaha shidaalka laga qodo ee badda gudeheeda (Offshore Platforms).
Mashruucaas oo wajigiisa hore diyaar noqon doono sannadka 2020ka wuxuu ka koobanyahay rugo 2 qaybood ah: mid gunta badda jiifta iyo mid dusha sabbaynaysa. Rugta 2aad waxay soo saari doontaa tamar dheeraad ah oo wax ka beddeli karta xaaladaha badda, sida qowadda hirka, midda badda iyo caariga badda.
Caalim ka tirsan “Chinese Academy of Engineering” laguna magacaabo Zhang Jinlin, wuxuu sheegay in rugahani ka koobanyihiin mashaariic rayid iyo military isugu jira, loona habeeyay si aan tamar badan loo dayicin.
Marka horumarinta Teknoloojiyada Nuklearka lagu daro, Shiinuhu wuxuu laga soo bilaabo 2015kii hirgaliyay tiro isbeddello militari ah oo ay ka mid tahay dib u-habaynta Difaaca Qaranka iyo Ciidammadaba. Waa tillaabadii ugu muhiimsanayd oo la qaado tan iyo sannadkii 1955kii oo loola jeedo in awoodda military ee dalka lala simo ahmiyaddiisa dhaqaale.
Si loo xoojiyo awoodda iyo qalqaalada (Influence) caalamka uu ku leeyahay, Shiinuhu wuxuu kordhinayaa joogitaankiisa military ee dibadda, sida ka qaybgalka hawlgallada nabadgalyada (Peace Keeping) ee Qarammada Midoobay.
Iyo xitaa ku lug lahaanshaha carbisyo military oo wadajir ah oo lala sameeyo ciidammo kale, sida kuwa Ruushka, iyo waliba dhismaha Saldhigyo military oo dibadda ah.
Si ujeeddooyinkaas waafaqsan, 1dii Agosto 2017, waxaa la daahfuray Saldhiggii ugu horreeyay oo Shiinuhu ka dhisto Jamhuuriyadda Jabuuti, isla sannadkan gudihiisana, Pekin waxay miisaaniyadda militariga sare u qaadday 7%, iyada oo la gaarsiiyay $151 Bilyan oo Dollar.
Koritaanka military ee Shiinaha iyo himilooyinka istrateejiga ah ee Russiya waxay walaac ku hayaan NATO oo iyadana dhankeeda doonaysa in ay xoojiso awooddeeda military.
Warbixintii sannadlaha ee u dambaysay Gaashaanbuurta reer Galbeedka waxaa ku xusan in xaaladda noocaan oo kale ah abuuri karto nooc cusub oo “Dagaalkii qaboobaa” ah.
Dokumentigaas wuxuu qeexayaa 20 dhacdo oo caalami ahaan suuragal ah oo cawaaqib ku yeelan kara NATO ilaa sannadka 2035 gudihiisa, sida “Artificial Intelligence”, “Technological Development” iyo “Climate Change”.